प्रहरी भवन अगाडीबाट एउटै गाउँका आधा दर्जन घरमा चोरी, ८० वर्षीय वृद्धामाथी लात्ती प्रहार - Pradesh Dainik
प्रहरी भवन अगाडीबाट एउटै गाउँका आधा दर्जन घरमा चोरी, ८० वर्षीय वृद्धामाथी लात्ती प्रहार
शुक्रबार, बैशाख १३, २०७६ , प्रदेश दैनिक
सुन्दै अच्चम लाग्दो एकै गाउँका आधा दर्जन घरमा एकै रातमा चोरी भएको छ । मोरङको पथरीशनिश्चरे वडा नं. ५ र ६ का आधा दर्जन घर र पसलमा चोरी भएको हो । वडा नं. ६ को तिक्रिझाँकमा प्रहरी भवन छ तर प्रहरी बस्दैन । वर्षौँ देखि प्रहरी भवन भन्दै आएको सो ठाउँमा भवन छ तर प्रहरी नहुँदा स्थानीय हैरान भएका छन् ।
प्रहरीका लागि भनेर तयार गरिएको भवन
वडा नं. ६ को तिक्रिझाँकमा मंगलबार राति चोरी भएको स्थानीयले बुधबार विहान मात्रै थाहा पाए । चोरले घरमा भएका लत्ता कपडा, नगद रकम, सुनचादीँका गरगहना सबै लगेको छ । स्थानीय श्याम चन्द्रवंशीको घरमा राति १ बजे २ जना केटाहरु आएका थिए । श्याम की श्रीमती राधिका देवी चन्द्रवंशीले भनिन् “हामी सुतेका थियौँ राति १ बजेतिर २ जना केटाहरु आए म त छोराहरु होलान भनेको भरे आँखामा मोबाइल बालेपछि मात्रै थाहा भयो चोर रछन् । बुढाबुढी उठेर खेदाउन खोज्दा कता भागे पत्तो भएन” । करिब १७, १८ वर्षका युवाहरु रहेको राधिकाले बताइन् । २ जना मध्ये १ जनाले कालो सर्ट लगाएको समेत उनले बताइन् ।
सोही टोलकी फुल्की मण्डलको घरमा भएको सबै सम्पती चोरी भएको बताइन् । घरमा आफु एक्लै बस्ने गरेकी फुल्की राति भातेगौँडामा नाच हेर्न गएकी थिइन् । विहान आउँदा घरको सबै सामान भुइमा फालेको देखेपछि मात्र थाहा पाएको उनले बताइन् । उनको घरमा रहेको २० हजार नगद, सुनको फुली १ थान र चादीँको बाला १ थान चोरी भएको छ । फुल्कीले रुदै भनिन् “म रमेश मण्डलकोमा नाच हेर्न गएको थिएँ विहान आउदा ढोका खुल्लै थियो । मेरो सबै सम्पती चोरेछ । छोराको नगरिक्ता पनि चोरले लग्यो ।” सहकारीको बिल देखाउदै उनले दुःख गरेर कमाएको पैशा सबै चोरी भएको बताइन् । फल्कीका अनुसार उनका छोरा जीतन मण्डलको नागरिक्ता पनि चोरी भएको छ । उनि शारीरिक रुपमा असक्त रहेको र कमाउने मान्छे पनि कोही नभएको बताइन् ।
सोही टोलका मनोज मण्डलको घरमा पनि चोरी भएको छ । घरमा भएको बाकस नै मकैबारीमा फालेको भेटिएको कल्पना मण्डलले बताइन् । कल्पनाले भनिन् “हामी भित्र सुतिरहेका थियौँ बाहिरबाट ढोकाको चुकुल लगाएर बाकस चोरेछन् । बाहिर सुतेकी हजुरआमाको मुखमा पट्टि बाधेँर चोरले सबै सामान लगेछन् ।” ८० वर्षीय रेखा मण्डल कान नसुन्नेभएकाले पनि चोर आएको आफुले थाहा नपाएको रेखाले बताइन् । चोरले बाकस लगेपछि आफ्नो गालामा लात्तिले हानेपछि मात्रै थाहा पाएको रेखाले बताइन् । उनले थाहा पाए अनुसार चोरहरु ३ जना रहेको बताइन् । उनिहरुको घरबाट बाकसमा रहेको सबै साडी चोरले लगेको रेखाले बताइन् ।
खेरियाका सितरु मण्डलको घरबाट पनि नगद १ लाख ५० हजार र अन्य सामान चोरी भएको छ । घरको बाहिरबाट प्वाल खनेर चोर भित्र पसेको मण्डलले बताए । प्वालबाट भित्र पसेर मुख्य ढोकाको आग्लो खोलेर चोरले अरु सुतिरहेको ढोकाको चुक्कुल लगाएर सामान चोरी गरेको थियो । विहान उठेर हेर्दा बास बाँसघारीमा भेटिएको मण्डलले बताए । मंण्लका अनुसार बाकसमा रहेको चाँदीको वाला २ थान, सुनको फुली १ थान, कानको झुम्का २ थान चोरि भएको छ । चारले सुमन मण्डलको नागरिक्ता र सर्ट समेत लगेको मंण्डलले बताए ।
सोही टोलकी सुनिता चन्द्रवंशीको घरबाट पनि चोरी भएको छ । सुनको मंगलसुत्र, फूली, रिङ, चाँदीको पाउजु, विच्छी र सुनको सिक्री समेत रोरी भएको चन्दवंशीले बताइन् । छोराको पढाइका लागि ५० हजार ऋण खोजेर ल्याएको रकमबाट १० हजार खर्च गरेको र बाकीँ रहेको ४० हजार पनि चोरले लगेको छ । चाँदीको गहना गरिब २ केजीको रहेको र सुनको गहना डेढ तोलाको चोरी भएको चन्द्रवंशीले बताइन् ।
यस्तै वडा नं. ५ हसन्दह बजारमा रहेको नरेन्द्र चिया नास्ता पसलमा पनि चोरी भएको छ । राति नै गल्ला फोडेर करिब २ हजार नगद लगेको पसलका मालिक नरेन्द्र शाहले बताए । रिचार्ज कार्ड लगाएतका सामान चोरी हुँदा करिब २० हजार बराबरको क्षति भएको नरेन्द्रले बताए ।
यता सोही वडाको मैनखाडी चोकमा रहेको चौधरी किराना तथा खाजाघरबाट पनि चनेरी भएको छ । पसलको ढोका फोडेर गल्ला फोडेको तर गल्लामा रकम नभएका कारण अन्य सामान चोरी हुदाँ करिब २० हजारको क्षति भएको संचालक धनिराम चौधरीले बताए ।
यस्तो पनि चोर
चोरले सामान र रकम त चोर्यो तर खाजाघरमा रहेको माछा मासु, वियर, रक्सी, सुकुटी समेत चोरी भएको छ । नरेन्द्र चिया पसलबाट १ कार्टुन गोर्खा स्ट्रङ वियर र अन्य रक्सीको आइटम चोरी भयो । यता चौधरी खाजाघरबाट गोर्खा स्ट्रङ, टुबोर्क वियर, अन्य रक्सीका आइटमहरु, चुरोट, फ्रिजमा भएको मासु, माछा समेत चोरी भएको छ । चोरले पसल देखि केही पर खेतमा लगेर सो रक्सी खाएको धनिरामले बताए ।
वडा नं. ५ र ६ साविको हसन्दह गाविस हो । यी दुवै वडामा प्रहरी चौकी रहेको छैन् । व्यापारीहरु यसरी चोरीका कारण हैरान भएको बताउछन् । व्यावसाय चलाउन मुस्किल पर्न थालेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यो क्षेत्रमा प्रहरी चौकीका लागि भवन तयारी अवस्थामा रहेता पनि हाल सम्म पनि प्रहरी बस्न सकेको छैन् । सो भवन हाल स्थानीयको पटेर, दाउरा राख्ने ठाउँ बनेको छ । सरकारी भवन प्रयाप्त छ तर पटक पटक पहल गर्दा पनि प्रहरी चौकी रहने व्यवस्था नभएको ५ का वडा अध्यक्ष जोग बहादुर धिमाल बताउछन् । पटक पटक प्रहरी ल्याउन माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको धिमालको भनाइ छ । अव स्थानीयले नगर र इलाका घेराउ नै गर्न बाध्य पारेको वडा नं. ५ का सदस्य चेतेन्द्र खड्काले बताए । अब पनि यसरी बेवास्ता गरे वडाका सबै जनताले प्रहरी कसरी ल्याउन पर्छ भनेर नगर र इलाकामा गएर खोज्ने खड्काको भनाइ छ ।